China Thermoforming firimu fekitari uye bhizimisi | Boya
Boya inopa ese emvura queening uye kukanda firimu sepasi firimu rekutakura chikafu, iro rinogona kushanda pamhando dzese dzemuchina we thermoforming, iine rakanakisa pasherufu-yehupenyu yezvakasiyana zvekutakura zvekudya.Musika wedu unovhara Aisa, North America, South America, Australia, Europ, Middle East neSouth Africa .Boya anotarisira kuzove mutengesi wako wenguva refu nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nebasa rehunyanzvi.
Wepamusoro uye Pazasi firimu rakanakira kurongedza izere mhando yechigadzirwa chinoda yakaderera- uye yakakwira-dhirowa mashandiro nekumhanyisa kugadzirwa, kubva kuchizi nenyama kune zvekubheka zvinhu, pasita, pizza, uye masangweji.
Zvekutakura mhinduro, isu tine mhando dzakasiyana dzezvinhu zvekuzadzisa zvaunoda zvichienderana nechishandiso maererano nezvipingaidzo zveoksijeni, zvipingamupinyi zveunyoro, kusagadzikana, uye kushanduka. Tiine makore makumi maviri ane ruzivo boka rehunyanzvi, isu tinotora zvese izvi zvinhu mukutarisa uye nekupa mhinduro yakanakira iwe!
●Dairy uye chikafu chakaoma
●Yakagadziriswa uye yakagadzirira kudya chikafu
●Nyama, chizi nehuku
Chigadzirwa Mashoko Kuita Colors Inowanikwa
Achigadzira firimu PA, EVOH, PE, PP, EVASurlyn Yakaumbika yakakwira barriers base webhu. Ichena, Nhema, Yero, Bhuruu, Girinhi, Kusvikira gumi mavara ekudhinda
Yisiri-yekuumba firimu PA, EVOH, PE, PP, EVASurlyn Isina kugadzikana yakakwira chipingaidzo pamusoro pewebhu
●Yakasarudzika yekuumba zvivakwa
●Hwakasiyana huwandu hweoksijeni kutapudza mitengo
●Kujeka kwakanakisa kwauri kuti uratidze chigadzirwa chako
●Yakakwira kukanganisa uye kubaya kusagadzikana
●Inochengetedza simba patembiricha inotonhora
●Pasina kudonha kana kurongedza zvigadzirwa zvakaomarara kana zvakapinza
1.What ari kukurukura mazwi?
Tinogona kugamuchira FOB, CFR, CIF.
2.Iwe une hesera mudura?
Aiwa mabhegi edu ese & firimu zvakagadziriswa. Tichatanga kuburitsa mushure mekugamuchira mirairo.
3.Chii chikuru kushandiswa kwemafirimu ako nemabhegi?
Iyo inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri inoenderana nechikafu, mishonga, zvekurima uye zveindasitiri Raw Zvishongedzo zvekurongedza.
4.Ipi nzvimbo yako yefekitori?
Tiri iri Yixing guta Jiangsu dunhu rinova awa rimwe chitima kubva Shanghai.
Pashure: Shrink Bhegi uye Firimu
Zvadaro: Vacuum homwe
Evoh Tube Bhegi
Vacuum Bhegi Firimu
Vffs Kupisa Kuzadza Firimu
Mhepo cusion firimu
Shrink Bhegi uye Firimu